Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa la xaliyay khilaafkii ka taagnaa Gudiga doorashada ee Gobolada Waqooyi ee ay magacawday dowlada, taasi oo uu ka horyimid Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi
Dadaalo lagu doonayo in wax looga qabto tabashooyinka Guddiyada Doorashooyinka ayaa ka billowday magaalada Garoowe, halkaasoo markii ugu horreysay ay si fool ka fool ah u kulmeen Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi iyo Raysul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed. ka soo jeeda Gobaladda Waqooyi.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa tilmaamaya in afar xubnood oo ka socda garabka Gudoomiye Cabdi Xaashi lagu dari doono guddiga doorashada ee gobolada waqooyi oo ay magacaawday dowlada Soomaaliya.
Gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa horey uga horyimid gudiga uu magacaabay raiisul wasaaraha, isagoo ku tilmaamay guddi aan matali karin oo ay ku jiraan askar iyo shaqaale dowladeed.
Si kastaba ha ahaatee, Qaraarka ay gaareen Guddiga Doorashooyinka Waqooyiga (NEC) ayaa la rumeysan yahay inuu fure u yahay isku raaca hannaanka lagu soo dooranayo xubnaha Gobollada Waqooyi ee Muqdisho.
Beesha Caalamka ayaa in muddo ah ku howlaneyd sidii loo xalin lahaa khilaafka kala dhaxeeya guddiga doorashada waxaana shirar lagu qabtay magaalooyinka Gaalkacayo, Garoowe iyo caasimada Muqdisho.